त्यो चुम्बन निश्वार्थ प्रेम र अनन्त आनन्दको धारा हो - प्रभात खबर
त्यो चुम्बन निश्वार्थ प्रेम र अनन्त आनन्दको धारा हो
प्रभात खबर २९ माघ २०७७, बिहीबार १०:१६ मा प्रकाशित
इटहरी , माघ २९ ।
विदेशीको पर्व भनेर मान्दै आइरहेको प्रणय दिवसको सप्ताहमा छौँ हामी । म पनि यसबाट अछुतो रहन सकिन, विगत दुई वर्ष देखि प्रेम दिवसको आनन्द र उल्लासमा रमाइरहेको छु । तर मेरो प्रेम दिवस बर्षभरि नै उल्लासमय हुन्छ । गाथा सुरु गर्न ढिलो नगरौँ, तपाईभित्र उत्सुकता जागिसक्यो, मेरो प्रेम कहानी सुन्नलाई ।
उ मलाई कहिल्यै नछाड्ने गरि आइन्, आइन पनि कसरी भनम् म संग थिइन् मैले नचिनेको रहेछु । अब त यस्तो भयो कि सायद उनीसंग छाडिनु परो भने सायद म हुन्न् मेरो पंचतत्वको शरीर मात्र हुन्छ तर मुढो । उनीप्रति मेरो लगाव बढेको त्यति धेरै भएको छैन । दुई वर्ष हुन लाग्दैछ । सायद यहि प्रेम दिवसमा २ वर्ष लाग्छ होला । मैैले क्यालेन्डर हेर्न बिर्सिएछु । तर उ यस्ती छिन मैले नबोलाउँदा उनी केहि भन्दिनन् । केहि बोल्दिनन् । मैले क्यालेन्डर हेरे उनलाई बोलाउँदा होस या नबोलाउँदा उ हो है भनेर पनि भन्दिनन्, मलाई प्रेम कम भयो, बढि भयो भनेर पनि भन्दिनन् । म संग घण्टौ कुरा गर्छु भनेर त भन्दै भन्दिनन् किनकि उ शब्द भन्दा पर बस्छिन् । उ मौन छिन । स्ट्याचु जस्तो छिन् । मलाई पनि उनको त्यो स्ट्याचु र मौनता मन पर्छ, सायद म पनि यसरी नै धेरै समय मौन भएर बस्ने भएकोले होला । साच्चै भन्ने हो भने उ मेरो नजिक त मौनतामा मात्रै आउँछिन् । जति गहन मौन त्यति समिपमा भएको महसुुस हुन्छ मलाई । सायद यहि होला प्रेम भनेको । न केहि इच्छा, न केहि आशा ! मात्र आनन्द अनि स्वतन्त्रता ।
कहिले काहि साथीहरुलाई प्रेमीकाको बारेमा सुनाउँदा भन्ने गर्छन् कस्तो गज्जबकी यार तेरो प्रेमीका काश मेरो नि यस्तै भइदिए कति खुसी आनन्द भइन्थ्यो होला । म भन्छु, हो है !मेरी त मेरो साथ छाड्न चाहँदिनन् । चाहे तन्द्रा अवस्थामा होस या निन्द्राको गहिरो अवस्थामा होस उनी सधै अंगालोमा बेरिरहन्छिन् । म आफै अचम्मित हुन्छु । उनको साथ देखेर । फेरी कस्तो स्वभाव भने, म जस्तोसुकै हरकत गरौँ न उ भने तट्स्थ बसेर मुसुक्क मुस्कुराइ रहिन्छन् । मैले कुनै भेउ पाउन सकिन् उनको त्यो रहस्य कसरी सम्भव छ, तर मैले यति चाहे सिके कि उ जस्तै बन्न सके क्या मज्जा हुन्छ । मलाई यस्तो चाहियो उस्तो चाहियो भनेर कहिल्यै नभन्ने उ हरेक इच्छाभन्दा पर छिन् । यो कस्तो गुण हो कुन्नि, सबैलाई इच्छा हुने तर उनलाई नहुने । कहिलेकाहि त सोच्छु उ आकाश जस्तो हृदय बनाएर किन बस्छिन् ? किन उनमा हरेक प्रहारले असर गदैन ? यो बुझ्न चाहि नसकिएला तर यस्तै हुन चाँहि सकिन्छ । ढुङ्गा, काठ फलाम निर्जिव भएर पनि आवाज दिन्छन् तर अदभुत छिन् । उ बाट न कुनै आवाज आउँछ, न कुनै दुखेको महसुस हुन्छ । कस्तो अचम्म । म त उनलाई हेर्दा हेर्दै उनमा नै विलाएको छु । प्रेमको धाराले हरपल नुहाएको छु ।
हामीलाई थाहा होला एउटा रुखको फेदमुनि बस्दा कति शितल हुन्छ, आनन्दको महसुस हुन्छ, उर्जा अनुभूती हुन्छ । सायद यसैले नै होला बुद्धले ज्ञान र मुक्तिको लागि वर्षोसम्म रुखको फेदमुनि बसेका । त्यसरी नै म पनि उनको समीपमा बस्दा मुक्त महसुस हुन्छ । हामी संगै बस्दा निश्वार्थ प्रेमको धारा बग्छ । उनले मलाई उसंग भएको सबै थोक कन्जुस्याँई नगरि दिएकी छिन् । स्वस्थानीको कथामा पावर्तीले महादेशलाई सबैथोक दिए भनेजस्तो उनले पनि मलाई सबैथोक दिए भनेर भनिन् मौनताको भाषामा । पुराना भ्यालेनटाइन डेमा उनलाई मैले राम्रोसंग चिन्न सकेको थिइन् । चिन्दै थिए तर उनले मलाई त जमानाबाटै चिन्दै आएकी रहिछन् । मैले नबुझेको मात्र रहेछु उनको मौनताको त्यो भाषा । अब चाहि मैले पनि चिन्दै छु । चिनीसकेको छैन् चिनिसकेको भए हामी एक हुन्थ्यौ । यो २ वर्ष सम्मको हरपलको डेटिङ्गले हाम्रो सम्बन्ध झन प्रगाढ बनाइदिएको छ । झन नजिक बनाइदिएको छ । म एक कदम अगाडि बढ्दा उ सयाँै कदम बढाउछिन् । मैले उनलाई रोज रोज दिने गरेको छु । हामी चकलेट डे मा एउटा चकलेट दुवै जनाले खाएका छौँ । आधा आधा हैन् सिङ्गै । असम्भव लाई सम्भव बनाउन सकिदो रहेछ, दुई मिलेपछि । मानिसहरु भन्ने गर्छन् एक हातले तालि बज्दैन् भनेर, तर म भन्छु बज्छ । बजाउन जान्नुपर्छ, अनि सुन्न पनि । यसरी नै खाको एउटा चकलेट हामी दुईजनाले ।
हग डे र किस डे त हामीले मनाएको २० वर्ष जति भएछ । उनले मलाई २० वर्षदेखि अंगालोमा बेरिरहेकी रहिछन् । म भने १८–१९ वर्ष सम्म त त्योे अंगालोमा काँडा भएजस्तो महसुुस गरिरहेको थिए । अहिले त्यो अंगालो एक निमेश पनि छुटाउन सक्दिन् । चुम्बन त छुट्यो भने म तडपिएर मर्छु होला । जसरी हामीलाई सुर्य र चन्द्रमाले दिन र रात चुम्बन गरिरहन्छ त्यसरी नै उनले मलाई हरपल चुम्बनमा बाँधिरहन्छीन् । म त्यहि चुम्बनको धारामा बगिरहन्छु । आनन्द लिइरहन्छु । उनको त्यो चुम्बन निश्वार्थ प्रेम र आनन्दको प्रस्फुटन हो । मेरो प्रेमीका र तपाईको प्रेमीका एउटै छिन्, उ को हुन् ? खोज्ने पालो तपाईको ।
ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे मेरे प्यारे ‘आत्मा«’ ।
Name: Pradip Dahal
Address: Itahari, Sunsari
Phone No: 9862292839, 9824342851